China Ike ime ụlọ grill igwe Nrụpụta na Factory | Chuliuxiang
Tinye ihe ọkụ ọkụ bq eletrik gị, kpokọta ihe ndị ahụ, ma tọọ tebụl.
Iji ihe ọkụ ọkụ CLUX eme nri dị mfe. Naanị gbanye ọkpụkpọ okpomọkụ ka ọ dị ọkụ. Mgbe ọ ruru ogo okpomọkụ dị elu nke ogo 450, ọkụ ọkụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ga-enwu. Ugbu a ị dịla njikere ịcha steak, burgers, anụ ezi ma ọ bụ fillet azụ ka izu oke. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịme nri nke na-adịghị mkpa ka a na-ebu ụzọ sụọ, jiri ọkpụkpọ okpomọkụ a na-emegharị emegharị ka grill na obere okpomọkụ.
Nhazi okpomọkụ: Igwe ọkụ eletrik a na-abịa na usoro njikwa okpomọkụ, na-enye gị ohere ịhazigharị okpomọkụ nri ngwa ngwa site na 0 ° F ruo 300 ° F iji nweta ego zuru oke nke ịchọrọ.
Iri nri elu: Ngwunye kọntaktị a na-abịa na grill na-adịghị mma. Efere efere dị mma maka pancakes, àkwá na anụ ezi; efere grill nwere ike nweta akara grill na ọgịrịga, steak na azụ.
Nchekwa oke ọkụ: Igwe ọkụ ọkụ BBQ a nwere agịga okpomọkụ, ọ ga-akwụsị kpo oku ozugbo ma ọ bụrụ na okpomọkụ dị n'ime ahụ dị elu. E wezụga nke ahụ, ngwaọrụ nchebe ihu igwe abụọ na-eme ka ọ dịkwuo mma iji.
Ọ dị mfe ịsachapụ: Ihe mkpuchi na-adịghị mma na-eme ka efere grill dị mfe iji hichaa nwayọọ nwayọọ. Efere grill, ite mmanụ na mkpuchi fan na-apụ apụ bụ nke enwere ike ịpụpụ yana ọ nweghị nchekwa. IHE: Tray nke ntapu nwere ike ịcha agba na igwe efere, biko jiri aka sachaa ya.
Nke gara aga: Nri gas esi nri n'èzí
Osote: Igwe anaghị agba nchara 4 ọkụ gas grill
anụ ọkụ eletrik grill
ebe obibi ọkụ grill
ime ụlọ grill
Ime ụlọ na-enweghị anwụrụ ọkụ
Igwe ọkụ Rotisserie Na-atụgharị Anụ Anụ Mkpọ
Ebe a na-eme achịcha ọkụ eletrik nke ụlọ